चिसो मौसममा टनसिल हुनबाट कसरी बच्ने ? | Mechikali Daily
चिसो मौसममा टनसिल हुनबाट कसरी बच्ने ?
Posted By: रमेश पराजुलीon: ५ मंसिर २०७७, शुक्रबार १५:३७
बुटवल । तपाई हामी धेरैमा टनसिल साझा समस्या जस्तै बनेको छ । मुखको भित्री भाग तथा गलाको माथिल्लो सतहमा दुई गाँठा हुन्छन्, जसलाई बोलीचालीको भाषामा टनसिल भनिन्छ । यो संवेदनशील अंग प्रायः चिसोले सुन्निने गर्छ । तसर्थ टनसिलको समस्या चिसो मौसममा देखिने गर्छ । टनसील शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक प्रणालीको एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो ।
टनसिल सुन्निएको अवस्थामा खानपिनमा समस्या हुने मात्र होइन, दुखाईले थुक निल्न पनि कठिन हुने गर्छ । जसले गर्दा हामीलाई स्वास्थ्यमा समस्या हुने गर्दछ । टनसिल भएमा घाँटीमा खसखस हुने, खाना, र्याल, रस, थुकसमेत निल्न गाह्रो हुने र बोल्दा कठिनाइ अनुभव हुने गर्दछ । यस्तो लक्षण देखिएमा यसप्रति सावधानी अपनाउने तथा उपचार गर्नुपर्दछ ।
– घाँटीमा खसखस हुने
– खाना, र्याल, रस, थुकसमेत निल्न गाह्रो हुने ।
– बोल्दा कठिनाइ अनुभव हुने ।
टनसिलका लागि योग
टनसिलबाट जोगिन उष्ट्रासन, ताडासन, पश्चिमोत्तासन, जालन्धरबन्ध उज्जासी प्राणायाम आदि योग गर्न सकिन्छ ।
टनसिलको जडीबुटी उपचार
– मनतातो पानीमा फिटकिरी मिसाएर उठ्नेबित्तिकै र सुत्नेवेलामा कुल्ला गर्ने ।
– तुलसी तथा खयरको बोक्रा लशून, असुरो, भृंगराजको चिया नुनसँग दिनको ३–४ पटक पिउने ।
– खयरको बोक्रा चुस्ने ।
टनसिलको प्राकृतिक उपचार
– कुलकुल तथा कुञ्जल क्रिया गर्ने
– एनिमा तथा बाफ लिने ।
– घाँटीमा तातो कपडा / गलबन्दी बाँध्ने ।
– जीवनशैली परिवर्तन गर्ने । जस्तै, चुरोट, तमाखु, गाँजाजस्ता धूमजन्य पदार्थको सेवन छोड्ने । बासी, दूषित, बेमेल र अप्राकृतिक, चिसो भोजन नखाने ।